Yintoni enokubangela ukurhoxa kukaPopu Benedict-Geofumadas
Yintoni enokubangela ukurhoxa kukaPopu Benedict
NgoFebruwari, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Namhlanje, ilizwe elihlukanisiweyo litshintshile emva kwebali elisibonisa kuphela ukubandakanyeka kweCawa yamaKatolika kwimeko yehlabathi.
Namhlanje ibiya kuba yinto eqhelekileyo ngoMvulo 11 kaFebruwari nge-ephemeris engekhe igqithe ngaphaya kweedolophu ezinomthengi wayo iNtombikazi yaseLourdes, kushushu kwibala eliqala namhlanje, ngokutya kwasekhaya kwi-champas ejikeleze isikwere, singqongwe ngoLwesine Iintshatsheli zebhola ekhatywayo ezinzulwini zobusuku kunye neendwendwe eziza zivela kwezinye iilali zizishiya ezinye izitshintshiselwano zakwamanye amazwe zikhangele amantombazana anezincumo ezinzima epakini.
Kodwa ukunika umzekelo, kumxholo waseVenezuelan kwi-Twitter, i-6 ye-10 ye-hashtag ijikeleze lo mcimbi:
Ke, iindaba zithathe amajelo eendaba ngokumangaliswa ekuzeni kokusa kwilizwekazi laseMelika; Ukusuka kwezona zaziso zigcinwayo ukuya kwiyelenqe eligqithisileyo, kulindelekile kuba mvanje nge-Intanethi ziye zaduma. Iimuvi ezinjengeeNgelosi kunye neeDemon zishukumisa imvakalelo yokuba akukho nto yenzekayo kobu bomi ngaphandle kokufihla ngasemva.
Oku, kunye nokuzonwabisa okuveliswe ngumsitho wokuvulwa konyana wam kunyanzele ukuba ndityalomali amazwi e-755 ngesihloko esiya kuthi sithathe inxaxheba kwiintsuku ezilandelayo ze-45.7, nangona ngoku umbuzo ungomnye kunye nesihloko senqaku nje, oko kuphuma kwindlela yethu yezobuchwephesha, kodwa hayi kwimeko yethu yenkcubeko.
Kwakuza kulindeleka, ngenxa yobudala bakhe
Le yeyona mpendulo igcinakeleyo. Umntu oneminyaka engama-85 ubudala unemiqobo emininzi emzimbeni kwi-ajenda efuna iihambo ezikude, iintlanganiso ezinde, kunye nokuba semva kohambo olungaphezulu kokuxazulula iingxaki kuthetha ukuchaza imigaqo-nkqubo ejikeleze inkolo ethe kunyaka ophelileyo ibhaptizwe i-1,196 yezigidi; hayi ngaphantsi kwe-17% yabemi behlabathi.
Into esusa ikhredithi kule mpendulo yokuqala kukumangaliswa kweendaba; ngaphandle kwentshayelelo, ngaphandle kwesaziso sangaphambili, kwaye kwiintsuku nje ezili-18 kwangaphambili; ukushiya ngaphandle kwentloko isikhundla kanye ngexesha lentshiseko enkulu ngonyaka. Nangona kuye kwakho ukurhoxa kathathu ngaphambili, eyokugqibela yenzeka phantse kwiminyaka engama-3 eyadlulayo kwaye yayiphakathi kwembambano yokwamkelwa okanye hayi yeengxabano, ii-antipopes kunye nobunye ubunzima emva kweminyaka engama-600 ephantse yaphela ngokurhoxa kwakhe.
Uxinzelelo lwamaxesha langoku.
Siphila kwixesha apho uxinzelelo lwentlalo, lokuziphatha kunye nokuziphatha luxoxa ngokungqongqo ngezikhundla apho u-Benedict wayedume kakhulu; Nangona iphepha lakhe lokuqala le-thesis kwiSt. Bonaventure libuyiselwe kuye e-1954 ngokugxeka kakhulu uNjingalwazi uMichael Schmaus; ngezikhundla eziqale ukwaphula iipateni zesithethe zexesha.
Ukuqhomfa, umtshato wesini, ulawulo lokuzalwa, i-euthanasia, ubuqhetseba bemfuza, isipho somzimba, ukubiza nje imiba embalwa enamaqela anamandla okuphembelela kwihlabathi liphela. Kwaye ezi zinto apho kuya kuba nzima ukuvumelana. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ukuba sithathela ingqalelo ukuba zeziphi izikhundla ezizimeleyo ngokuchasene nezikhundla ezihlangeneyo ukusuka kwindlela eqinisekileyo.
Kungenzeka ukuba thina ngokobuqu sikholelwe ukuba ukungavumi yindlela efanelekileyo yokuthintela ukukhulelwa ... kodwa ukukholelwa ukuba le yeyona ndlela ilungileyo kubantwana bam bobabini, kwaye siqwalasele ukuba le isombulula ingxaki yokukhulelwa phakathi kolutsha kunye noomama abangatshatanga kwilizwe lam ... kukho into Umgama omkhulu.
Izikhundla zakhe zingqinwa yileta ebeyibhekisa ku-Cardinal Theodore McCarrick, ubhishophu omkhulu wase Washington DC
Kunokubakho ukwahluka okusemthethweni kwezimvo phakathi kwamaKatolika malunga nokuya emfazweni kunye nokusebenzisa isigwebo sentambo, kodwa kungenjalo, nangona kunjalo malunga nokuqhomfa kunye ne-euthanasia.
Ke, ngelixa uxinzelelo lwala maxesha lusenokungabi sisizathu sokuyeka kwakhe; Ngokuqinisekileyo, uxinzelelo luya kuba kuye nabani na owenzekayo kuye.
Umbuzo olandelayo untsokothile.
Ngeli veki amajelo eendaba eza kujikeleza lombuzo wokuqala, ithuba eliya emva komzuzwana
Ngubani oza kuba ngupopu omtsha?
Ayizothusa into yokuba imeko yeLatin American ibenomdla koku. Kukho umahluko omkhulu phakathi kwempembelelo yokuba le nkolo imele eMelika kunye nenqanaba lesiko elineYurophu emva kokuchaphazeleka kwayo kwembali kunye nokuwohloka okuveliswe sisizukulwana apho ubukrelekrele kunye nophuhliso bushiya imeko yokomoya ngendlela ethile. Ngaphandle kokuba sisenzo esifanelekileyo kwimeko evelayo kwiinkalo zonqulo, inokuba yinto enomdla xa ujonga imiceli mngeni kwimigaqo-nkqubo edibanisa imizamo yokuxhasa uphuhliso lwentlalo, ngaloo ndlela amanani abonakala eArgentina, eBrazil, eHonduras naseMexico.
Ke ayizukubamangalisa, into yokuba abo bagqatswe kweli lizwekazi bakhankanyiwe ... ukuba ngendlela umzuzu wenguqu udlula kwiinkalo ezininzi, kubandakanya nentlalontle efuna ukuphuma kumqolomba populism kwisicelo esibonakalayo phambi kwemiceli mingeni yelungelo elinxibileyo.
Ngayiphi na imeko, sonke sinethemba lokuba nabani na oza, athabathele ingqalelo umngeni omele ihlelo lenkolo elinepesenti ephezulu yabemi behlabathi ... sinethemba leenguqu ezikhokelela kubomi obungcono kakhulu apha ... ngelixa ilungiselelwe Ngaphezulu.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Google Earth i-7 imida ukutshintshwa kwezithombe ze-ortho ezilungisiweyo
Post Next Ikhosi ye-Global Mapper kunye ne-3 engaphezulu enikwa nguCivileOkulandelayo »